ဒီနေရာ (၈)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော် - Real Gaming Myanmar
ဒီနေရာ (၈)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်
By thant naing /5months ago / Astrology / No Comments
မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ် …. ။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်း စိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ …. ။
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက် ငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ်အရမ်း ကို မြန်မြန် ဆန်ဆန်ေ အာင်မြင်တတ် တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် …. ။
နှာခေါင်းရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာမှဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အော င်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ရရှိတတ်ပါတယ် …. ။
ညာဘက်ပါးပေါ်မှာ ထင်ရှားပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ မှဲ့တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုရင် အိမ် ထောင်ပြုပြီးနောက်မှာ အရမ်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ် ….. ။
မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာဖြစ်ဖြစ် မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို သာသာ ယာယာနဲ့ အခြေချနိုင်မယ့် သူတစ်ဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ တောင့်တစရာမလို ဘဲ ငွေကြေးပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ နေရ တတ်ပါတယ် ….. ။
ခါးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောင်းခြင်းရော ကံဆိုးခြင်းရော နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။ ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီး ကြီးပွားတိုးတက်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ….. ။
ညာဘက်လက်ဝါးပြင်မှာ မှဲ့ရှိရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုနှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းမယ့်အချိန် က လက်ဝါးပြင်ပေါ်က မှဲ့ရဲ့ တည်နေရာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ မှဲ့က လက်ဝါးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ငယ် ရွယ် တဲ့အချိန်ကစပြီး အောင်မြင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီးလက်ဝါးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ရှိမယ်ဆိုရင် အသက်ရလာတဲ့အချိ်န်မှာမှ စည်းစိမ် ဥစ္စာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှာပါ ….. ။
ရင်ဘတ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာ အများအပြားပိုင်ဆိုင်စေပြီး ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်းကို ပြတဲ့မှဲ့ဖြစ်ပါတယ် ….. ။
မေးစေ့ပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းခြင်းကို ပြပေမဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အား နည်းပြီး အထီးကျန်နေရတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ….. ။
မှဲ့ နဲ့ပတျသကျပွီး အယူအဆ အမြိုးမြိုးရှိကွပါတယျ။ မှဲ့တဈခုစီတိုငျးမှာ ဘဝနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖုံးကှယျထားတဲ့ မကျဆခြေျ့ တဈခုစီရှိပါတယျလို့ မှဲ့ပညာရှငျတှကေ ဆိုကွပါတယျ …. ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ နရောအမြိုးမြိုးမှာ မှဲ့တှရှေိနိုငျပွီး အခုဖျောပွမယျ့ နရောတှမှောရှိတဲ့မှဲ့တှကေတော့ ကံကောငျးခွငျးနဲ့ စညျး စိမျဥစ်စာကွှယျဝခွငျးကို ပေးနိုငျပါတယျတဲ့ …. ။
အရမျးကို ကောငျးတဲ့မှဲ့တဈမြိုးဖွဈပွီး ရှယျတူတနျးတူတှထေကျ ငှကွေေး၊ အောငျမွငျမှု ပိုမိုရရှိတတျတဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုငျပါတယျ ။ ဒီလိုမှဲ့ပိုငျရှငျတှကေ ခေါငျးနညျးနညျးမာတဲ့ သဘာဝရှိပမေဲ့ ဘာပဲလုပျလုပျအရမျး ကို မွနျမွနျ ဆနျဆနျေ အာငျမွငျတတျ တဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ …. ။
နှာခေါငျးရဲ့တဈဘကျတဈခကျြမှာမှဲ့ရှိနမေယျဆိုရငျ သခြောပေါကျခမျြးသာမယျဆိုတဲ့လက်ခဏာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အော ငျမွငျမှုနဲ့ ငှကွေေးနှဈခုစလုံးက အသကျ ၃၀ နောကျပိုငျး ဒါမှမဟုတျ အိမျထောငျကပြွီးမှ ရရှိတတျပါတယျ …. ။
ညာဘကျပါးပျေါမှာ ထငျရှားပွီး ပွတျသားတိကတြဲ့ မှဲ့တဈလုံးရှိမယျဆိုရငျ အိမျ ထောငျပွုပွီးနောကျမှာ အရမျးကို ခမျြးသာကွှယျဝလာမယျလို့ သိနိုငျပါတယျ ….. ။
မကျြခုံးနှဈခုကွားမှာဖွဈဖွဈ၊ မကျြလုံးနှဈလုံးကွားမှာဖွဈဖွဈ မှဲ့တဈလုံး ရှိမယျဆိုရငျ ခမျြးသာပွီး ဘဝတဈခုကို သာသာ ယာယာနဲ့ အခွခေနြိုငျမယျ့ သူတဈဦးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဘဝမှာ တောငျ့တစရာမလို ဘဲ ငှကွေေးပွညျ့ပွညျ့ စုံစုံနဲ့ နရေ တတျပါတယျ ….. ။
ခါးရဲ့ဘေးတဈဖကျတဈခကျြမှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောငျးခွငျးရော ကံဆိုးခွငျးရော နှဈမြိုးစလုံးဖွဈစနေိုငျ ပါတယျ။ ဥစ်စာပစ်စညျးပွညျ့စုံကွှယျဝပွီး ကွီးပှားတိုးတကျမှာ ဖွဈပမေဲ့ ဘဝရဲ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ ဝမျးနညျးစရာ၊ စိတျမခမျြးမွစေ့ရာတှကွေုံရမှာ ဖွဈပါတယျ ….. ။
ညာဘကျလကျဝါးပွငျမှာ မှဲ့ရှိရငျ ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုနဲ့ ကွှယျဝမှုနှဈမြိုးလုံး ရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးမယျ့အခြိနျ က လကျဝါးပွငျပျေါက မှဲ့ရဲ့ တညျနရောအပျေါမှာမူတညျပါတယျ။ မှဲ့က လကျဝါးရဲ့ အပျေါပိုငျးမှာရှိမယျဆိုရငျငယျ ရှယျ တဲ့အခြိနျကစပွီး အောငျမွငျပွညျ့စုံမှာဖွဈပွီးလကျဝါးရဲ့ အောကျပိုငျးမှာ ရှိမယျဆိုရငျ အသကျရလာတဲ့အချြိနျမှာမှ စညျးစိမျ ဥစ်စာနဲ့ အောငျမွငျမှုတှရေရှိနိုငျမှာပါ ….. ။
ရငျဘတျရဲ့ ညာဘကျအခွမျးမှာရှိတဲ့မှဲ့က စညျးစိမျဥစ်စာ အမြားအပွားပိုငျဆိုငျစပွေီး ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြးပြျောပြျော ရှငျရှငျ ဖွတျသနျးနိုငျခွငျးကို ပွတဲ့မှဲ့ဖွဈပါတယျ ….. ။
မေးစပေ့ျေါမှာရှိတဲ့မှဲ့က စညျးစိမျဥစ်စာနဲ့ ပတျသကျရငျ ကံကောငျးခွငျးကို ပွပမေဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးနဲ့ ပတျသကျရငျ အား နညျးပွီး အထီးကနျြနရေတတျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ ….. ။
Previous: “အချစ်ရေးမှာ ဇနီးဖြစ်သူက… သူ့ကို …စတင် ချဉ်းကပ်ခဲ့တာလို့ …ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ …#အောင်လအန်ဆန်း (စွံတယ်နော် )”
Next: သင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီအချက်တွေကိုသတိထားမိတယ်ဆိုရင်တော့ သူသင့်ကို တကယ်ချစ်နေလို့ပါ